Chiredzi FC Archives - Southern Eye
Gishon Ntini linked with Caps United move
NOMADIC coach Gishon “Gizha” Ntini could be set for shock return to Caps United as he is reportedly on the Harare club’s wish-list following the departure of Taurai Mangwiro and the entire backroom staff to Harare City recently.
December 15, 2014 - 5:00 am
Ntini alleges match-fixing as Triangle beat Chiredzi
GISHONI Ntini alleged match-fixing, accusing Triangle of paying off some of his players to lose the Lowveld Derby at Chishamiso Stadium yesterday.
November 10, 2014 - 2:31 pm
Rhinos edge Chiredzi
CASTLE Lager Premier Soccer League side Black Rhinos head coach Jostein Mathuthu heaved a huge sigh of relief after his side edged Chiredzi FC in a Premiership match at Chishamiso Stadium yesterday.
October 30, 2014 - 6:49 pm
Chiredzi still believe as they head to Ascot
RELEGATION-THREATENED Chiredzi FC travel to Gweru tomorrow for a date against fellow newcomers Chapungu aiming to collect maximum points, hoping for a dramatic survival from the top-flight league.
September 26, 2014 - 5:00 am
Dynamos open three-point gap
A BRACE from the returning Rodreck Mutuma helped Dynamos to a comfortable win over Chiredzi FC at Rufaro Stadium yesterday as the Castle Lager Premier Soccer League defending champions edged closer to the title after opening a three-point gap.
September 4, 2014 - 5:04 am
Dynamos Football Club need the cash
DYNAMOS say they will field their strongest teams for both their Castle Lager Premier Soccer League tie against bottom side Chiredzi FC at Rufaro Stadium today and the inaugural $110 00 TM Pick n Pay Challenge Cup against old foes Highlanders on Saturday.
September 3, 2014 - 5:00 am
Bosso engage Zifa over player
HIGHLANDERS FC will now be seeking the intervention of the Zifa Player Status Committee to expedite the case of winger Tapiwa Dephistara as it has emerged that Chiredzi FC have demanded a full amount for the player before issuing out his clearance.
August 19, 2014 - 5:04 am
Chiredzi stun Buffaloes in seven-goal thriller
CHIREDZI FC overcame their woes in the Premier Soccer League (PSL) campaign with spirited performance to beat army side Buffaloes 4-3 in a thrilling Chibuku Super Cup first round tie at Sakubva yesterday.
August 18, 2014 - 5:00 am
ZPC remain unbeaten, Chapungu beat Buffaloes
ZPC KARIBA kept their unbeaten record intact after they were held to a one-all stalemate by Chiredzi FC in a Castle Lager Premier Soccer League match played at Chishamiso Stadium yesterday.
August 7, 2014 - 5:05 am
TAPIWA Dephistara’s move to Highlanders has hit a snag as Chiredzi FC are adamant that the 21-year-old striker is still their player.
August 5, 2014 - 5:10 am